KUKHALWA NGOMASIPALA WASEMLALAZI KWABAHLUPHEKAYO – Sivubela intuthuko Newspaper
Indlu yomndeni wakwaShobede kuWard 17 kumasipala uMlalazi
BAKHALA ngomasipala waseMlalazi ngokushaya indiva ukusiza umndeni wakwaShobede okuWard 17 eMabhokweni ohlala kwindlu engawa noma inini.
UZandile Shobede (35) onesifo somdlavuza wesibeletho uthe balala bahlanu kwindlu ewuRondo nebonakala ungaphandle ukuthi ayikho esimeni.
“Siyafisa kunoma ubani ongasisiza ukuba asisize ngoba sihlala sihlanu kulendlu, ingawa noma yinin futhi iyanetha Uma izulu lina sithwala kanzima,” .
Lokhu kususe omkhulu umsindo ezinkundleni zokuxhumana umphakathi ugxeka ikhansela kanye nobuholi bukamasipala uMlalazi ngokungabakhathaleli abantu.
Okuvelayo ukuthi umasipala unalo uhlelo lwezindlu zalabo abaswele ngaphansi kwaSukuma Sakhe. Ikhansela lakuleWard uZakhona Cele uthe konke kulele kumasipala njengoba aluhambisa uhlu lwabantu abadinga izindlu ngokushesha.
“Sinalo ulwazi ngesimo somndeni wakwaShobede kodwa konke kulele kumasipala ngoba sesiluhambisile uhlu lwabantu abadinga izindlu ngaphansi kohlelo lukaSukuma Sakhe,” kusho uCele ngamafuphi.
Ekhuluma naleliphephanda uShobede uthe okubuhlungu akekho osebenzayo njengoba beziphilisa ngemali yesibonelelo kwazise naye uyagula ngenxa yomdlavuza wesibeletho.
“Siyafisa ukuthi nathi sihlale kwindlu esesimeni kodwa isimo asivumi akekho osebenzayo siphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni, nami angikwazi ukusebenza njengoba nginesifo somdlavuza wesibeletho,” kusho Shobede.
Lo mndeni osekunesikhathi uphila lempilo usuhlalele ethembeni lokuthi bakhona abazothinteka babasize babakhele umuzi osesimeni. USihlalo wenhlangano engenzinzuzo iWalk-Away Foundation uNksz. Nomfundo Msweli uthe sebezame kaningi ukunxusa osomabhizinisi ukuba baphonse esivivaneni kwazise alukho usizo abalutholayo kumasipala uMlalazi.
“Sike sazama ukuthola usizo kubantu abahlukene ukuzama ukusiza Lo mndeni kodwa okwamanje akukho okusaqhamukile, siyanxusa noma ngabe ubani ongaba nosizo aphumele phambili ukusiza lomndeni ophila ngaphansi kwesimo esibucayi,” kusho Msweli.